Wenzani indoda eshadile uma ithandana nomunye wesifazane | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 22/11/2021 18:10 | Izithandani Nezocansi
Ukungathembeki kukhona futhi phakathi kwamadoda ashadile kuvame kakhulu kunalokho kubonakala. Impela uzithola ukuleso simo, uhlanganaphi a indoda eshadile futhi nithandana. Kodwa ukungabaza akugcini lapho, ngoba uma siyithanda kakhulu leyo ndoda, siyofuna ukwazi ukuthi iziphatha kanjani uma esethandana.
Indaba yokuthi indoda iqonywa isenza sicabange kanjalo umshado wabo akuwona owanelisa kakhulu. Impilo yakho kumele ibe yinjwayelo, ingabi nandaba, futhi ibe nesicefe. Nakuba noma yini ayilungisi isimo sakho sengqondo, abaningi babo abanankinga nokwenza abakwenzayo.
1 Injani indoda eshadile uma ithandana nomunye wesifazane?
2 Indoda ishada kanjani nesithandwa sayo?
3 Iseluleko kumuntu oshadile onesithandwa
Injani indoda eshadile uma ithandana nomunye wesifazane?
Indoda eshadile kufanele nakanjani bazisa kakhulu isimo nobudlelwano babo ngaphambi kokuthatha isinqumo. Ngezinye izikhathi izinyathelo okufanele zithathwe azicabangi, kodwa ngokuqinisekile awugxilanga ekutheni ufike kanjani ekungathembekeni.
Bazocabanga kuphela ukuthi ubuhlobo babo bamanje bubi kangakanani futhi bangatholi ukukala ukuthi buyini okungenzeka uphuthelwe. Abavuseleli ukuthi yini abangayithola ebudlelwaneni babo, uma lisekhona ithemba noma kukhona okungathuthukiswa. Ubuvila bungelinye lamaphuzu abo futhi bangabona kuphela lokho abanakho lapho sebelahlekelwe ngempela.
Indoda engathembekile ingakwazi ngokufanayo ukuthandana nomunye wesifazane. Kulapha lapho kuqala khona ukungabi nasithakazelo kancane kancane ekuphileni komkhaya wakhe nokungawugcini uphila lelolangabi elicishayo. Indoda eshadile leyo iqala ukuba nekhanda kwenye indawo, uba ongathi sína ngokwengeziwe ngenxa yokungakwazi ukusingatha zonke izibopho zakhe ngesikhathi esisodwa. Ukude kakhulu futhi ezikhathini eziningi unabo ikhanda lakhe licabanga ngobunye ubuhlobo.
Ubudlelwano bakhe nomkakhe liyehla ngamandla. Akasakujabuleli ukwabelana naye izikhathi, akasakuthandi ngisho nokulalela izinkinga noma imizwa yakhe. Ekhaya imali ayifiki njalo, ngoba iyanyamalala ehleli nesithandwa sakhe.
Indoda ishada kanjani nesithandwa sayo?
Ubuhlobo bomshado ekhaya bungathinteka ukunganaki kokukodwa kwalaba ababili. Ungafika ucabange ukuthi indoda iyona ebuka enye, lapho umkakhe eseqala ukuzidela. Ngokusekelwe kuleli phuzu, leli qiniso lingahluka kwabaningi izici zomzimba nezengqondo, ngaleyo ndlela indoda ijabule ngokwengeziwe ngokubheka ngaphandle kwekhaya lokho engakutholi ngaphakathi.
Uma indoda eshadile inenkosikazi, ngokuqinisekile izofuna ngichithe isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka naye. Ubona kulowo wesifazane konke ongathanda kumlingani wakho wamanje. Mhlawumbe kumane kuyizinto ezintsha ezivusa amadlingozi nokuzijabulisa, okuthile osekulahlekile kakade ekhaya lakho.
Iqiniso lokwazi ukuthi usothandweni kuyoba yingoba akakutholanga ngokwenyama, kodwa kuzo zonke izimfanelo nezindinganiso azitholayo. Ngaphezu kwalokho, uyohlale ufuna ukwazi okwengeziwe isithandwa sakho futhi uzobe enikeza lonke lolo thando ukuthi uswele ekhaya.
Uhlale esazi isithandwa sakhe, unjani futhi wenzani ngoba unakho engqondweni. Uthanda ukunakekela isithunzi sakhe nokuzilungisa lapho ehlangana naye. Yini enye, uthola injabulo futhi ethukile uma sebehlangene.
Iyini imbangela yemizwa? Kungaba nezizathu eziningi. Kungase kube ukuthi imizwa elula lapho ubona isithandwa sakho ikujabulise, kodwa futhi kungase kube ukuthi uyaqala ukwenza futhi ukuthi ukuvinjelwa kukwenza ube novalo.
Iseluleko kumuntu oshadile onesithandwa
Ngaphambi kokuthatha noma yisiphi isinyathelo esiqinile nesisemthethweni, indoda kufanele ibe nemibono ecacile uzizwa unjani futhi isimo sinjani. Ngeke kube lula kuye ukuthi athathe isinqumo uma engaboni ngokuhamba kwesikhathi ukuthi luthando ngempela yini aluzwayo.
Ekuqaleni kwabo bonke ubudlelwano, yonke into ihlale inhle kakhulu futhi iphelele. Ungathandana, kodwa kungase kube okwesikhashana. Lona ucingo'ukuthatheka', lapho ungathola khona yonke imizwa eduze kothando olungenamibandela, ngoba imizwa inamandla kakhulu.
Isenzo sokuthandana ingahlala izinyanga kuya eminyakeni futhi akukho okudlula ukukubona ngokuhamba kwesikhathi. Kumele ucabange ukuthi uma uthatha isinqumo sokukhetha omunye umuntu kumele umamukele nawo wonke amaphutha nobuhle bakhe.
Abantu abaningi bathathwa yizinkanuko zabo nothando kuyiqiniso abangakwazi ukulilawula. Kuyokwenzeka ukuthi imizwa onayo ngalowo muntu izodlula futhi uma ukwenze kanye izophinda izikhathi eziningi. Ubudlelwano obuqinile bufika nemingcele eminingi futhi phakathi kwabo laba bantu ababili kufanele bamukelene lapho bebhekene nakho konke ukushiyeka futhi basebenzele ukusizana ukukhula.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Wenzani indoda eshadile uma ithandana nomunye wesifazane
Ungaba kanjani umuntu ongcono